कोचिंग र उत्पादनहरू
सम्मान - सफलता कि सजिलो छ!
कम बोल्नुहोस्, बढी भन्नुहोस्
स्विच फ्लिप गर्नुहोस्
जादु जस्तो बेच्नुहोस्
रणनीति बैठक बुक गर्नुहोस्
तपाईंको सफलता तपाईं मा पहिले नै छ ...
सम्मान एक जादुई शक्ति हो जसले चमत्कारहरू, सफलताको लागि एक चमत्कारी गोली काम गर्दछ, र यो वास्तवमा हामीले बुझ्न नसक्ने कुरा हो कि हामी सबैलाई यस कक्षामा पहिलो कक्षाबाट स्कूलको पाठ छैन।
यसैले मैले यो पुस्तक ती सबैका लागि लेखेको छु जसले म जस्तो अनुभव गरेका छन्, जसले निकै लामो प्रयास गरे पनि प्रगति भैरहेका छैनन् उनीहरू चाहानुहुन्छ र यसको योग्य छ।
"सम्मान - सफलता यति सजिलो छ" मा म तपाईंलाई जादुई सुत्र देखाउँछु, म तपाईंलाई कसरी सँधै सजिलो र सजिलो छ शीर्ष मा पुग्न, तपाईंको चौगुडी सफलता र सबैको फाइदाको लागि देखाउँदछ।
नि: शुल्क पुस्तक अनुरोध गर्नुहोस्
कसरी आदर काम गर्दछ, हामी सजिलैसँग सबै सम्बन्धमा अझ बढी आदर ल्याउन सक्दछौं र कसरी सकारात्मक र छिटो सराहनाले काम गर्दछ - जुन मैले पुस्तकमा वर्णन गरेको छु।
यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ, अधीर र प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ र सफलताको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि कोचिंग तपाईंको लागि मात्र चीज हुन सक्छ ... हाम्रो छेउमा एक सल्लाहकारको साथ, यो केवल छिटो र सजिलो मात्र छैन, यसलाई पनि कम कम प्रयास र त्रुटि आवश्यक पर्दछ। ।
मसँग निःशुल्क minute। मिनेट रणनीति कुराकानीमा आफैलाई खोज्नुहोस्। समय भनेको पैसा हो, उनीहरू भन्छन्। तर त्यस भन्दा बढि त्यहाँ अवसर लागतहरू, उपेक्षाको लागत, ढिलाइ, ढिलो हुनु, गुमाउनुपरेको ईन्धन हो। लागतहरू जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्न र बुझ्नुहुन्न र अन्तमा हामीलाई धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ।
अब मसँग अर्को नि: शुल्क भेट भेट्टाउनुहोस् - म यसलाई पर्खिरहेको छु!
नि: शुल्क-45 मिनेट। रणनीति बैठक बुक गर्नुहोस्
सम्मान - सफलता सजिलो छ
के तपाई एक उद्यमी, स्वरोजगार व्यक्ति वा शिल्पकर्मी हुनुहुन्छ?
तपाईं धेरै काम र बस अधिक हावा को सपना देख्नुहुन्छ?
के तपाईं बजारमा तपाईंको शीर्ष सेवाहरूको लागि राम्रो मूल्यहरू र उच्च शुल्कहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन चाहानुहुन्छ?
वा तपाइँ केवल चीजहरू सजिलो, राम्रो र थप रमाईलो भएको चाहनुहुन्छ?
त्यसोभए तपाईले त्यहाँका सब भन्दा शक्तिशाली सेनालाई तपाईको लागि काम गर्न दिनुपर्दछ - तपाईको गतिविधिहरूमा असीम ऊर्जा हाल्नुको सट्टा।
म आदरको कुरा गर्छु। आफुको र तपाईको वरपरको लागि प्रामाणिक, वास्तविक सम्मानको। के भइरहेको छ भन्नेमा तपाईं चकित हुनुहुनेछ। यो सजिलो छिटो र उत्तम छ ...
थोरैले मात्र यसलाई चिनेका छन्।
आदर कुञ्जी हो - र तपाईंले यसलाई अब प्रयोग गर्नुपर्दछ। तपाईंको ग्राहकहरूको फाइदाको लागि, तपाईंको परिवार र आफैं।
सम्भवतः हाम्रो समाजमा सबैभन्दा अन्त्रित शक्ति हो। हामीले यस बारे स्कूलमा थोरै मात्र सिकेका थियौं, समावेश दैनिकको जीवनमा आदर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे जान्न दिनुहोस्।
मैले यो मेरो जागिरमा धेरै वर्ष पछि मात्र याद गरें, र मेरी श्रीमती एक पटक भन्दा बढि प्रसुति चिकित्सक र प्रशिक्षक थिए।
र अचम्मको कुरा यो हो: केवल ज्ञान मात्र पर्याप्त छैन।
मैले यो अवधारणा बुझेको छु भनेर विश्वास गरेपछि पनि, यसले अझै पनी प्रणालीलाई बुझ्नको लागि प्रशंसा र सम्मानको बारेमा धेरै विवरणहरू पत्ता लगाउन वर्षौं अभ्यास र अनुप्रयोग प्रयोग गर्यो।
सबैले पक्कै नै गर्न सक्छन्, आफैलाई यो पत्ता लगाउनुहोस् - र यसको लागि आधा व्यावसायिक जीवन लगानी गर्नुहोस् ...
तर यदि तपाईं अधीर, जिज्ञासु, र भोको, म जस्तो हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई संक्षिप्त रूप देखाउँदा खुसी हुनेछु। यो धेरै सजिलो छ ...
जस्तै साना बच्चाहरूले गर्छन्: पहिले यो गर्नुहोस् - त्यसपछि बुझ्नुहोस्।
र तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ, चरण-चरण, म तपाईंलाई देखाउनेछु र म तपाईंसँगै खुशी हुनेछु। तिमीलाई मनपर्यो भने। आश्चर्य आश्वासनहरू, सहज सफलताहरू समावेश गरिएको छैन।
मसँग नि: शुल्क रणनीति कुराकानीको लागि साइन अप गर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई के हुँदैछ हेरौं। म तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा जान्ने आशा गर्दैछु।
JT Foxx शिकागो - आदर सबैको आधार हो
न। १ व्यवसाय कोच, सिरियल उद्यमी, रियल इस्टेट र निजी लगानीकर्ता, सम्मानको शक्तिमा JTFoxx र जुर्गेनसँग उनको अनुभव लन्डनमा-दिने व्यापार कार्यक्रममा।
प्याट्रिक, युवा उद्यमी, १: १ कोचिंग weeks हप्ताका लागि।
मैले आफ्नै सीमाहरू पत्ता लगाए, मेरो ध्यान केन्द्रित गरे, मेरो आत्मविश्वास बढे, नयाँ परिप्रेक्ष्यहरू भेटिए र ब्यापारलाई अगाडि बढाए। यो यसको लायक थियो, सिफारिस गरियो।
इरेम, कानून विद्यार्थी र सम्भावित मार्केटिंग र सोशल मिडिया उद्यमी जुर्जेनको साथ जुम कोचिंगको बारेमा, कोरोना अवधिको बीचमा।
सम्मान मा अन्तर्राष्ट्रिय आवाजहरु
२०१ Resp र २०२० मा संसारभरि "आदर" मा अन्तर्वार्ता।
फ्रेड फिशब्याक, भाला उद्योग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी - सम्मान
सम्मान - केहि आज एकदम महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ।
सम्मान को अवधारणा यति आधारभूत छ, यो के तपाईं पहिलो नियन्त्रणमा हुनु पर्छ।
हामीलाई यो अवधारणाको सरलता चाहिन्छ।
मलाई लाग्छ कि तपाईं एकदमै महत्त्वपूर्ण चीजमा हुनुहुन्छ र म जुर्जेनलाई के गरिरहेको छु भनेर म धेरै उत्साहित छु।
सम्मान हाम्रो सम्बन्धको आधार हो,
आदर भनेको आत्म-सम्मानको जग हो,
सम्मान अतिरिक्त विकासको आधार हो।
तपाई वास्तवमै के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म उत्साहित छु, यो धेरै शक्तिशाली अवधारणा हो।
लन्डनको प्रतिष्ठित कानून समाजमा सम्मेलन
लन्डनको प्रतिष्ठित कानून समाजमा व्यापार सम्मेलन २०२० मा "सम्मान" को बारेमा संक्षिप्त अन्तर्वार्ता।
साक्षात्कार हिल्टन लन्डन मेट्रोपोल
हिल्टन लन्डन मेट्रोपोल लबीमा "आदर" अन्तर्वार्ता २०२०
म उनीप्रति धेरै eणी छु, उसले आफ्नो हृदयको परियोजनाहरूमा सबै थोक राख्छ, संसारको लागि खुला छ र परिवर्तनको डर हुँदैन, चुनौतीहरूको डर हुँदैन ... मैले उसलाई चिनेको छ महिनामा उसले मलाई धेरै नै मद्दत गरिसकेको छ। मेरो व्यक्तिगत सोच मा, तपाईं केवल एक अधिक संग बाहिर जानुहुनेछ।
© जुर्जेन विल्के
सदस्य क्षेत्रको साथ DigiMember